ज्योतिषशास्त्र अनुसार चिना भनेको के हो ? चिना बनाउन अनि हेराउन किन आवश्यक छ ? जान्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»ज्योतिषशास्त्र अनुसार चिना भनेको के हो ? चिना बनाउन अनि हेराउन किन आवश्यक छ ? जान्नुहोस
By मनिषा थापा on २२ चैत्र २०७४, बिहीबार ०७:२८ धर्म/दर्शन
ज्योतिष एउटा यस्तो विधा हो जसलाई आँखाको प्रयायबाचीका रुपमा परिभाषा गरिएको छ । किन यसलाई आँखा भनियो त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, हाम्रो आँखाले संसारलाई हेर्न सकेजस्तै ज्योतिषको माध्यमबाट हामी संसारलाई देख्न र भोग्न सक्छौ । जसबाट भूत, वर्तमान र भविष्य के हुँदैछ भन्ने कुराको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा ज्योतिषलाई दुई तरिकाबाट अध्ययन गरिएको पाईन्छ – सैध्दान्तिक तथा व्यवहारिक ।
– रुचि क्षेत्र भन्नाले व्यक्तिले पढ्न चाहेको विषय वा काम गर्न चाहेको क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ । आफ्नो रुचि क्षेत्र र कुनबाट आफूलाई बढ़ी फाईदा र सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु नै जीवनको मुख्य उपलब्धि हो । यो कुरा ग्रहको स्वभावअनुसार ग्रहको बलाबलको आधारमा बताउन सकिन्छ । ग्रहको स्वभावअनुसार जुन ग्रह बढ़ी बलियो हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा पनि त्यहीँ ग्रहको प्रभाव बढ़ी परेको हुन्छ । यो कुरा समयमै पत्ता लगाउन नसकेकै कारण धेरै व्यक्तिहरु समस्यामा परेको देखिन्छ ।
कुन विषय पढ्दा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो सफलता मिल्छ र कुन पेशा गर्यो भने आफूलाई बढ़ी सन्तुष्टि मिल्न सक्छ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न नसक्दा धेरै मानिसहरु यसको पीड़ाबाट छट्पटाईरहेको पाईन्छ, कसै-कसैलाई भने भाग्य बलियो भएकै कारण जुन पेशा रोज़े पनि सफलता मिल्न सक्छ तर यो कुरा सबैमा लागु हुँदैन किनकि जतिसुकै मिहिनेत गरेपनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् हाम्रो समाजमा । आफ्नो कुन्डलीमा सबैभन्दा बढ़ी बलियो ग्रह र स्थानका आधारमा रुचिक्षेत्रको पहिचान गर्न सक्यो भने जीवनमा पछुताउ हुँदैन । कतिपय व्यक्तिहरु जुन आफ्नो रुचिको विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो साथीभाइ र परिवारको कारण अरुकै पेशा रोज्न बाध्य हुन्छन् जसका कारण पेशाप्रति वितृष्णा जागृत हुँदै, असन्तुष्टि पैदा भई विषय परिवर्तन गरी डिप्रेशनको शिकार बन्न पुगेको देखिन्छ ।
धेरै राम्रो प्रश्न यस्ले धेरै जनालाई लाभ पुग्न सक्छ । मानिसको जीवनमा आईपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो विवाह । सामान्यतया हाम्रो धर्मशास्रमा विवाह गर्ने उमेर २५ वर्ष पुगेपछि मानिन्छ तर ज्योतिषमा भने यो कुरा अलि अघि पनि हुन सक्छ अलि पछाडि पनि । धेरै व्यक्तिहरु आजकल आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको समस्यामा परेपछि मात्र ज्योतिष हेराऊन आउँछन् तर विवाह गर्नु अघि नै यससम्बन्धी सल्लाह र परामर्श लिएर गर्ने हो भने समस्या नै नआउन सक्छ । त्यसकारण हाम्रो समाजमा विवाह हुनु भन्दा अघि नै धेरै कुराको विचार गरिन्छ ।
विवाह गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त सँस्कार नै मिल्नु पर्दछ । सँस्कार मिलेन भने त्यहीबाटै द्वन्द सुरु हुन थाल्छ । कसैकसैले मात्र आफ्नो भन्दा फरक सँस्कारमा गएर पनि विवाह गर्छन् तर त्यो भित्रैदेखिको इच्छा नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले स्वीकार गर्न पुग्छन् । त्यसकारण सँस्कार मिल्यो भने धेरै कुरा मिल्न सक्छ ।